Ukungena encinci ...
Umbuzo wokwenzeka komsebenzi odibeneyo wabalingani okwangoku ufanelekileyo. Iingqungquthela ezininzi kwi-intanethi zinikezelwa kwingxaki yomsebenzi nomfazi wakhe kwisakhiwo esifanayo, isikhungo, iofisi, isebe, igumbi ...
Iingcamango ziyahlukileyo - abanye babona imeko enjalo kuphela kunye nokuthetha ngenkuthalo malunga nentsebenziswano evelisayo emsebenzini kunye nobudlelwane obuvumelanayo ekhaya. Kwabanye, ukusebenzisana ndawonye kuyimvelaphi yentlungiso kunye nokuqhawula umtshato. Kanti abanye, bejamelene nale nto, bacele imibuzo kunye nokuziphatha kwiimeko ezinjalo.
Ndimele ndithi kule nkqubo yeSoviet, umsebenzi odibeneyo womyeni nomfazi kwelinye iqumrhu uthathwa njengempumelelo kwimibini yomtshato. Kodwa ngoku, kunye noshintsho kwezobudlelwane kwezoqoqosho kunye noshintsho kwiingqondo zabantu, umsebenzi womfazi kunye nomyeni wakhe uqwalaselwa, ugwetywa ngumlingane ngokungafanelekanga. Kukholelwa ukuba umyeni wakhe emsebenzini kufuneka asebenze kuphela kwimisebenzi yakhe ngokuthe ngqo kwaye angaphazanyiswa ngumlingane wakhe.
Ngaba kunokwenzeka ukusebenza nomyeni wakhe?
Kubantu abancinci, umsebenzi odibeneyo womtshato wesibini ngokuqhelekileyo awubangeli iingxaki. Kodwa, kwinkqubo yokuqokelela amava obomi, zombini kumyeni nakwiminqophiso yomfazi, iinjongo ezibalulekileyo ziyatshintsha. Inkambo yobomi ngokwahlukileyo iyahluka - abanye bafumana ukukhula okukhawulezayo, ukuphakama nokuhla, ngelixa abanye bazinzile kwaye bezolile. Kufuneka kuqatshelwe ukuba xa sisebenzisana nomyeni wakhe, isithuba somntu ngamnye sitshatileyo , ngasinye sifumana ithuba lokuphazamisa kwiminqweno kunye nenkampani yabalingani. Konke oku kunokubangela ukuphulwa kokuvisisana nobomi bentsapho okanye nokuba kukho ukulwa phakathi kwendoda nomfazi.
Abaxhasi bomsebenzi odibeneyo bafumene kule ndawo inzuzo eninzi. Musa ukulinda de ukuba umyeni wakhe emsebenzini uphelise yonke ishishini lakhe. Indlela yokusebenza kunye nekhaya ilula - unokuhamba ngenye imoto, okanye enye indlela kwizithuthi zikawonkewonke. Bobabini banikwe inkampani enomdla kwaye akukho namnye kubo ongayi kulala kwaye akayi kukhawuleza. Kwakhona kunokwenzeka ukuba kuvunyelwe iishedyuli zokusebenza ngohlobo lokuba iintsuku zihambisane, kwakukho ithuba lokuthabatha abantwana kwi-kindergarten okanye esikolweni kwaye benze imisebenzi eyahlukeneyo yasekhaya. Umsebenzi womfazi nomyeni kwisigqeba okanye isakhiwo esifanayo sibavumela ukuba bachithe ixesha elide kunye kunye nesihloko kwingxoxo kulo mzekelo kuya kufumaneka, bathathe inxaxheba kwimibutho yenkampani, bancedisane emsebenzini kunye nokunye okuninzi.
Ngaloo ndlela, sinokukuphawula ukuba icala elibi. Ngokomzekelo, umsebenzi odibeneyo uhlala uxhatshazwa - lo mbhangqwana ukwesaba ukukhutshana kunye nokuhlala bekhuphisana. Umdaka ongathandekiyo bobabini banokushiya kunye nobudlelwane bobudlelwane-ophantsi-omnye unyanzelekile ukuba ahlasele omnye ukuba asebenze. Isithuba somntu kunye nomyeni wakhe nomfazi wakhe siya kupheleka, kwaye isihloko esisebenzayo sencoko sinokuhlambalaza kangangokuba ukungaqondi kakuhle kuqala.
Iimeko xa omnye umfazi ephethe umphathi womnye kunokuba angabonakali. Ngoko, indoda nomfazi abanomdla ekuphuhliseni inkampani banokufumana ulwimi olufanayo emsebenzini. Ngaphezu koko, kulolu hlobo, kulula ukugcina umkhondo wabantwana, ukujongana neengxaki eziphambili zekhaya (umzekelo, ipayipi iphukile kwaye kuyimfuneko ukuphuthuma ekhaya, ngaphandle koko abamelwane baya kukhukhula) kwaye baququzelele umsebenzi osekelwe ekhaya.
Kodwa ukuba iqabane lomsebenzi elithintekayo? Ukuba umphathi ngumfazi, kwaye umyeni makafanele amthobele? Ngaphezu koko, kwihlabathi lethu elisekho patriarchal, ukuhanjiswa kwendoda kumfazi kunokubonwa njengento yokuhlambalaza kwaye kubangela ukuhleka phakathi kwabahlobo, kunye nesimo sengqondo esibi somfazi ngokwakhe. Emva koko ama-scandals angaqala, okuya kuqhubeka kokusebenza nasemakhaya. Ngoko kufuphi nokuqhawula umtshato.
Ziziphi iindima ezibalulekileyo esizidlalayo?
Imikhwa emibi yabasetyhini, indlela yokuyiqonda nokuyilahla
Isimo sobulumko ebomini babantu abakujikelezile
Ngabantwana abancinci, akukho nto iphunyukileyo
Indlela yokubuyisela izipikili emva kokukwakha
UBrigitte Bardot: "Andizange ndibe ngumntu"
Ziziphi iimpahla zokuthabatha kwi-ski resort
Isaladi ye-Bean ne-parmesan ushizi
Isonka sePita kunye nenkukhu
Ikhokoni: izakhiwo ezixhamlayo
Ukunciphisa ubunzima ngoncedo lokutya kwamanzi